फेसनदार जैकेट दृढ हाम्रो जाडो दराज मा मुख्य स्थान कब्जा। तर पनि 50 वर्ष पहिले, एक व्यावहारिक र न्यानो लुगा थिएन ज्ञात।
पंख को उद्भव को शुरुवात ध्रुवीय यात्रा सदस्यहरूसँग skis को चिरपरिचित ब्रान्ड निर्माताहरु बैठक विश्राम। तिनीहरूले के राम्रो चिसो बाट सुरक्षित वास्तविक जाडो लुगा, हुनुपर्छ, तिनीहरूलाई फेला परेन। मुख्य रुझान स्वीकृत गरिएको छ जब, डिजाइनर विचार छानिएन, र अब ज्याकेट, एक लुगा नम्बर 1 सबै जाडो मौसम छ मानिसहरू, महिला र बच्चाहरु बीच धेरै लोकप्रिय फाइदा लिइरहेको।
सुशील पुरुषहरु जैकेट
हरेक वर्ष, नयाँ भागहरु शुरू र यो मा स्टाइलिश लुगा मा एक साधारण ज्याकेट खोल्दै, थप र थप डिजाइनर मन को जाडो दराज को यो तत्व काम गर्न। तिनीहरूले आफ्नो ध्यान यो सिजन बचाउनुभयो छैन।
नयाँ संग्रह कुनै पनि तस्बिर गर्न फैशन जैकेट चयन गर्न मानिसजातिको बलियो आधा सक्षम गर्नुहोस्।
नयाँ सिजन को प्रवृत्ति प्रवृत्ति
पुरुष तल जैकेट बीच पहिलो स्थानमा बमवर्षक ज्याकेट कब्जा। तिनीहरूले विश्वव्यापी, brevity र सुविधा छन्। माल र रंग को एक किसिम को प्रयोग मार्फत यी सुशील जैकेट "शीतकालीन 2015-2016" पूर्ण अप क्लासिक गर्न ब्रांडेड सुरुवाल को कुनै पनि साथ, sportiness को आशय संग एक सुखद इलेक्ट्रिक छवि बनाउन संयुक्त छन्।
Bombers एक कलर छोटो तल ज्याकेट संग्रह, विभिन्न शैलीहरू द्वारा विशेषता संग टाउको:
अमिल्दो zippers संग biker मोडेल;
जैकेट, कोट र जैकेट, शर्ट;
कलर र कफ बिना minimalism को शैली मा मूल जैकेट।
लामो जैकेट "काम" शैली देखाएका प्याच pockets र डाकू। तर यो सिजन यो प्रवृत्ति को फेसनदार तल जैकेट अलग सामाग्री - छाला वा चमक र iridescent रंग कुनै न कुनै डिजाइन उज्ज्वल स्वाद दिन्छ संग कपडा।
संधै जस्तै, लोकप्रिय रेट्रो शैली एक हुड संग परम्परागत खेल silhouettes पूरा गर्दछ।
स्तरीकरण पनि फैशन बाहिर जान्छ। त्यो वास्कट र podstezhki व्यक्त गरे। खैर, तल फैशन को उचाइ मा आज वस्त्र को एक अलग वस्तु रूपमा खेल जैकेट।
प्रयोग उत्पादनहरु को लागि सामाग्री धेरै फरक थिए:
जैकेट कपडे - मैट र चमकदार दुवै;
प्याटेन्ट छाला र अनुकरण सरीसृप को छाला अन्तर्गत;
कपडा, डेनिम र ऊन विशेष पूरण vlagoottalkivayuschey संग।
लोकप्रिय रंग - कालो, रक्सी र खैरो रङ्ग र कर्मेल सम्पूर्ण दायरा। पनि वोग मा नीलो, Emerald हरियो र हरियो सबै गाढा रंग।
मोडेलहरू को सजावट प्रिंट, पशु विशेष गरी चित्र, बिरुवाहरु, कक्षहरू, र abstraction हावी।
महिला फैशन जैकेट
एक ज्याकेट छनौट महिला, यसको व्यावहारिकता, स्नेह र सान्त्वना, तर पनि स्टाइलिश रुझान र लोकप्रिय रंग लागि मात्र होइन ध्यान।
यो सिजन, डिजाइनर फेसनदार जैकेट, तल जैकेट र तल कोट विशेष गरी आवंटित। यो हुन सक्छ छाडा रूपमा धोक्रे मोडेल र फारम-फिटिङ, silhouettes एक आंकडा सबै लाभ emphasizing। यसबाहेक, कोट एक midi लम्बाइ विशेषताहरु।
मूलतः स्पोर्टी शैली मोडेल प्रबल, र फर ट्रिम र विभिन्न डाकू पनि सान्दर्भिक रहने।
प्रवृत्ति रुझान जाडो 2015-2016
एक हिउँ-सेतो तल ज्याकेट, quilted र एक चिकनी संस्करण दुवै - मौसम को हिट। मोडेल प्यास्टेल रंग र विभिन्न उज्ज्वल रंग फैशन बाहिर छैन अझै पनि छन्। सबै भन्दा लोकप्रिय हो: गुलाबी, पहेंलो, सुन्तला, नीलो र हरियो।
मुख्य कुरा तल जैकेट महिला फैशन यो जाडो distinguishes कि - प्रिंट सबै प्रकारका। यसलाई डिजाइन र ढाँचाको, ज्यामिति र abstraction, चित्रण गर्ने फूल र जनावर, सेल र मोजाइकहरूमा चित्रहरू। Fashionistas नाजुक संरचना र 3D-ग्राफिक्स को एक किसिम चकित हुनेछ।
मौसम को हाइलाइट - जैकेट लागि परम्परागत कपडा असामान्य सामाग्री को सम्मिलन। अब फर र छाला केही नयाँ छन् किनकी, डिजाइनर को ट्वीड, ऊन, सिल्क, साटन र साटन अँगालेका छन्। यो पानी विकर्षक कपडा जाडो वस्त्र को मापदण्डहरु मेल रचनाहरूको प्रक्रिया र आफ्नो टास्नु तिनीहरूलाई शानदार र मूल बनाउन, जैकेट सजाउनु।
बच्चाहरु को लागि तल जैकेट
छोराछोरीको जैकेट मात्र होइन सुन्दर र उज्ज्वल हुनुपर्छ, तर पनि एक उत्कृष्ट गुणस्तर छ। सामान्यतया, तिनीहरूले सुधार कोमलता र waterproofing को गुण जहाँ किनभने यो छ, एक विशेष पंख र तल, जो पेट गर्न घाँटी देखि चरा हो प्रयोग गर्नुहोस्।
केटाहरू लागि सबैभन्दा लोकप्रिय मोडेल एक ज्याकेट-अलास्का छ। तर यो सिजन यो कमर मा नियामक drawstring द्वारा पूरक र दुवै बाह्य र आन्तरिक pockets संग replete छ।
सानो fashionistas लागि छोराछोरीको जैकेट अब शानदार हेर्न। तिनीहरूलाई मा, साथै महिला मोडेल रूपमा, त्यहाँ फरक कपडे को आवेषण छन्। धेरै मूल लग zippers वा बटनहरू संयोजन। सजावट प्रिंट, rhinestones र सेक्विन रूपमा प्रयोग।
संग्रह हो प्रस्तुत रूपमा ज्याकेट, र अतिरिक्त लामो मोडेल - कोट र कोट। को चयन जाडो जैकेट सबैलाई विशेष कुरा पाउनुहुनेछ भनेर, विशाल छ।
मानिसहरू लागि Hoodies - साथै के लगाउन
एक फर कोट किन्न मास्को मा जहाँ? मास्को मा सस्ता मिंक कोट
हरियो पोशाक को दराज किन?
लेग्गीन्स लगाउन के बाट: एक फैशन छवि बनाउन।
Eisenmenger सिंड्रोम: गराउनुहुन्छ, लक्षण, निदान, उपचार
रेस्टुरेन्ट कासा di Famiglia: वर्णन, मेनु, समीक्षा
रक्षा Dorostol, 970-971 वर्ष को रूसी-Byzantine युद्ध: घटनाहरु, कमान्डरहरु
आफ्नै हातले एक क्रेन कसरी बनाउने?